«Iny ianao iny» | NewsMada
«Iny ianao iny»
«Iny lalana iny». Nalaza izany tononkira izany tamin’ny andron’ny Tetezamita. Iza tokoa ny tsy hahatsiahy fa nanana ny torolalany sy ny sori-dalany manokana ireo mpikambana tao amin’ny Tetezamita, fony tamin’ny androny? Dia nalaza ho azy teo ny «Iny lalana iny», tononkira anankiray nampalaza ihany koa ilay tarika mpanao zafindraony avy ao atsimotsimo ao! Toa nahazo hery vetivety teo ilay fanjakana fa nitonona ho manohana Tetezamita avokoa izao adala sy hendry rehetra izao. Miala tsiny amin’ny fomba fanonona! Satria nentanin’«Iny lalana iny» ny rehetra. Mba samy nitady lalana tao amin’ny Tetezamita fa izay ilay “Iny lalana iny”.
Manana ny ambarany ny tononkira. Ary iza tokoa ny mpanao politika tsy hanarama mpanakanto rehefa tonga ny fotoana mialoha ny fifidianana, farafaharatsiny. Dia voizina sy lalaovina amin’izay tiana hitiavana azy ireny mpanakanto sy tononkira ireny. Mahagaga fa manjary malaza ho azy hatramin’ilay mpanakanto na tarika nipoiran’ny aingam-panahy, na dia mbola tsy manana ny toerany loatra aza.
“Iny ianao iny”! Malaza koa izany hira izany, herinandro vitsivitsy izay, any amin’ny haino aman-jery isan-karazany sy any amin’ny tambajotran-tserasera. Mpanakanto manana ny maha izy azy sy mipetraka amin’ny lazany rahateo. Isan’ny be mpangataka sy be mpankafy foana ny tononkira amin’ny alalan’ny filaharana avoakan’ny tompon’andraikitry ny fandaharana. Tian’ny olona ilay hira na heverina aza fa tononkira manambara fahadisoam-panantenana eo amina tantaram-pitiavan’olon-droa. Toa diso fanantenana sy diso safidy ny fandraisan’ilay vehivavy ny fitiavany ilay olon-tiany! Hira ve izany ka hira?
Eny e, “Iny ianao iny”! Azo itarafana ny fiainan’ny Malagasy ankehitriny. Izay ataony rehetra, toa tsy misy dikany sy tsy misy vidiny daholo. Ikirizany izao rehetra izao hahatonga ilay fifankatiavana haharitra nefa ilay notiaviny, toa tsy mirahahara akory sady tsy mijery ny fahoriany!
Mba hitan’ny mpitondra ve ny fahorian’ny vahoaka ankehitriny; mba tsaroany ve ny adim-piainany isan’andro isan’andro; mba heveriny ve ny tsy fandriampahalemana mampiteny ny moana etsy sy eroa; mba takany ve ny fisondrotry ny vidim-piainana efa tsy ho zaka intsony?
“Iny ianao iny… asa ianao raha mba mihevitra ahy”!